Ny SEO Iceberg: Mizaha zava-miafina misy fiatraikany amin'ny fikarohana Organika | Martech Zone
Androany, nanana antso mahafinaritra izahay niaraka amina orinasa iray izay niresahanay ny paikadim-pikarohana biolojika lalina (pun tin). Raha ny isan-jaton'ny mpanjifa sy ny karama mifandraika amin'izany dia avy amin'ny orinasa mitady anay Fahaizana SEO, marina tokoa izahay fa tsy nino ny SEO. Tsy hoe tsy fantatsika ny herin'ny fikarohana biolojika - paikady ifotony tanteraka ho antsika ny mitondra fahefana ary mitarika ny mpanjifantsika.
Nilaozanay ny fanandramana nilalao algorithme ary nametraka backlinks, nametraka ny ezaka nataonay ho amin'ny fandalinana lalina ny mpihaino ny mpanjifa sy ny atiny mahatalanjona izay hisarika ny saina sy handrisika ny olona hiova fo. Raha atao teny hafa, dia tsy mifantoka amin'ilay fikarohana, mifantoka amin'ny mpampiasa ny motera fikarohana. Azonao atao ny mametaka sy mampifandray ny banga ao amin'ny orinasanao ary manosika azy ireo hatrany amin'ny tampon'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERPs)… Raha tsy miavaka ny atiny dia tsy hitondra an'io mpitsidika io ianao manomboka eo amin'ny tranokalanao ka hiaraka aminao.
Tsy lazaina intsony ny fanovana algorithm sy ny fandrosoana ara-teknolojia. Mety hanatanteraka paikady satroka fotsy ianao (paikady izay tsy manitsakitsaka ny fepetran'ny serivisy Search Engine), fa raha manova algorithma ny motera fikarohana dia mety ho very ny fampiasam-bolanao manontolo. Good SEO izay nifantoka tamin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa sy ny fampandrosoana ny atiny; na izany aza, tsy ho very na kely aza ny fampiasam-bola nataonao.
Ity infographic ity dia maneho kely ny sasany amin'ilay olana. Tsy ny antony rehetra ahafahanao mamantatra sy miasa haingana fotsiny, fa maneho ny fitomboan'ny isan'ny singa misy fiatraikany amin'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa fikarohana Optimization.
Ny fiantohana ny laharana matanjaka ho an'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny dingana fantatra amin'ny hoe Search Engine Optimization dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny tranonkala. Inona no ilaina amin'ny fivarotana vokatra mahafinaritra sy famoronana atiny mahaliana raha tsy misy mahita izany? Rehefa manova ny fomba fitadiavany sy mamaly ny atiny ny mpampiasa, dia mampiditra endrika sarotra marobe izay miova tsy tapaka ihany koa ny SEO, ka mety ho sarotra amin'ny orinasa ny mitantana samirery. Penny Mafana Mena
Ity fanehoana ny fanatsarana motera fikarohana ity dia aseho toy izao manaraka izao:
Solontenan'ny Google ny masoandro ary mamoaka taratra an'ny fanavaozana ny varotra fikarohana izay misy fiatraikany eo amin'ny sehatry ny iceberg na, lafin-tranonkala iray misy fiatraikany amin'ny laharan'ny milina fikarohana.
Companies solontenan'ny sambo, tsy maintsy mizaha ny vongan-dranomandry fa sombiny kely fotsiny no hita.
Eo ambanin'ny tany dia misy hafa anton-javatra mieritreritra sy manatsara ny valiny mety indrindra.
Milaza ve aho fa tokony hanary SEO? Tsia, tsia fa mila mampihatra ny enti-manana ianao amin'izay misy akony lehibe indrindra. Ary tsoriko fa misy SEO consultant iza no mody mahatakatra ny algorithman'i Google ary manome toky anao amin'ny laharana - tsy takatrao mihintsy ny mpihaino anao, ny antony manosika azy ary ny paikadin'ny omni-channel izay hampirisika ny fiovam-po - tsy mendrika ny miasa.
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay amin'ny fitetezana ireo anton-javatra misy fiatraikany lehibe indrindra, misy ny antony lehibe toy ny hafainganan'ny pejy, ny hierarchy tranokala voaorina tsara, ny fikarohana ny teny lakile ary ny fandraisana andraikitra amin'ny finday, izay tokony ho fototry ny paikadin'ny SEO rehetra. Na izany aza, tsy tokony hamakafaka ireo anton-javatra hafa an'arivony sy handrosoana mandroso izahay, fa kosa miasa mba hampivelatra ny atiny hahasarika ny sain'ny olona, ​​fahefana, fitokisana ary fiovam-po. Miaraka amin'ny fototra mafy orina, ireo tetikady votoatin'ny votoaty ireo dia mahomby tanteraka. Ny maningana, an'ny
Misy maningana. Niara-niasa tamin'ny mpampanonta izay nandany vola am-polony tapitrisa amin'ny tetikadin'ny fikarohana sy ny atiny izahay hiadiana amin'ny mpifaninana. Amin'ireny tranga ireny dia nanangana trano fitahirizana angona be pitsiny izahay izay mihoatra ny sehatra SEO ara-barotra mba hamakafaka ireo anton-javatra etsy ambany. Tsy ny orinasanao anefa no vintana!
24 Jan 2017 amin'ny 5:25 PM
Lahatsoratra tena tsara misy teboka tsara. Manoro hevitra hatrany ny olona aho mba tsy hino ireo mpanolo-tsaina mampanantena laharana faha-1. Azo inoana fa mampiasa paikady spam na teknika hat-black hafa izy ireo izay tsy manome lanja farany ny fampiasana farany, na client mety.